Imidlalo eminingi ikhompyutha ukunikela abasebenzisi kuphela ngesakhiwo. Yiqiniso, kungaba ngendlela emangalisayo okuthakazelisayo, kodwa namanje abadlala ngokuvamile ufuna okungaphezu kobungane. Uma lena akuyona komhlaba ovulekile futhi akugcini fripley, okungenani amabhonasi kanye izimfihlo ngandlela-thile diversify ndima. Kepha uma kwaphulwa amanye amaphrojekthi kungenzeka izinkinga ngokuya okwakhe, le ngozi akuyona ncamashi okusongela chungechunge GTA, okuyinto namuhla uhlala ophakathi kwabantu bokuqala kakhulu, njengoba isibalo izici ngamunye izingxenye ngesikhathi sawo kungaba kalula ngokuthi i cishe unlimited. Yingakho, uma ucabanga ukuthi une ukudabula umugqa wendaba umdlalo ukuwuqeda, wena azilungile. Ukuze uthole ukuthi unakekelwa ngesisa 100%, uzodinga umzamo okuningi. Futhi, bheka, nanko, kukhona umbuzo: "? Zingaki ohambweni GTA 5 ukubabela"
I ezihlukahlukene zesithunywa
Uma unesithakazelo umbuzo bangaki ohambweni GTA 5, khona-ke lesi sihloko sizokusiza uqonde. Empeleni, konke akulula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Awukwazi ukusho ukuthi yonke imisebenzi zihlukaniswe kuphela indaba futhi nesyuzhetnye: uhlelo olunzulu kakhulu. Ngisho imisebenzi uzungu kuthiwa sokuhlukanisa zibe izinhlobo ezimbili, okuyinto zichaziwe ngezansi. Singathini mayelana nezimfuno uhlangothi zingahlukaniswa zibe inqwaba izigaba. Kunoma ikuphi, uzodinga ingqikithi yamahora mayelana amabili nanhlanu uzama ukuthola umugqa indaba, kodwa lokho umdlalo ungakwazi kudlule emhlabeni eyikhulu namashumi amahora. Nokho, konke lokhu kwaziswa kuyinto isingeniso, ngoba ngaleso sikhathi lo mbuzo obaluleke kakhulu futhi esiphuthumayo: "? Zingaki ohambweni GTA 5"
The main indaba ohambweni
Uma ufuna ukuthola izabelo eziningi kanjani GTA 5, khona-ke kufanele ucabangele ukuze. Ngakho, kufanele uqale nge imisebenzi nezokusigcoba okuyinto, njengoba kushiwo ngaphambili, zihlukaniswe izinhlobo ezimbili. Okokuqala - lokhu kunesigameko sokuphanga, okuyizinto ezibalulekile kakhulu futhi ukhiye ngesakhiwo. Umgomo wakho in the game - ukuze amaphuzu rob ezihlukahlukene eziyisithupha, okuyinto izotholakala kuwe njengoba indaba iqhubeka. ukuphanga yakhe yokuqala uzoqaphela yokuqala ukuqeqeshwa umsebenzi, kodwa abanye abahlanu kuyoba nzima nakakhulu. Qaphela ukuthi le imisebenzi chithi saka lwendaba ngawe ukudlala okuvelayo abaningi abanengxenye babeneminyaka abukhali futhi ezimnandi. Nokho, lokhu akufanele ukukuhlupha, futhi uma unentshisekelo, indlela ohambweni eziningi inkunzi GTA 5, impendulo eyodwa kuphela: kukhona eziyisithupha. Kodwa kumelwe aqonde ukuthi zonke izigameko zokubamba inkunzi wedwa akugcini.
Ezinye izindaba zika-ohambweni indaba
Usuvele ukwazi ukuthi kukhona imisebenzi ukhiye eziyisithupha mayelana necala lokubamba inkunzi kule game. Kodwa njengoba ohambweni ezinkulu GTA 5 kakhulu? Kukhona empeleni abaningana, kungenjalo ngabe uthole indlela amahora amabili nanhlanu Gameplay? Ngakho, ikhumbula imisebenzi eziyisithupha mayelana necala lokubamba inkunzi bonke umdlalo GTA 5 has 69 imisebenzi nezokusigcoba ezikuvumela shí emkhathini we yokudlala Los Santos kanye nakanjani ngikushiye ngabandayo. Kungani ungagcini nje kwenziwe: futhi ukuya jaha, futhi ngenjongo yezibhamu abanolaka, futhi fly indiza yehle ayosho ekujuleni kolwandle. Kulokhu, zonke imisebenzi ezihlobene nezinye ngempela indaba umugqa ngamunye eqinile, okungakwazi ishiwo iningi imidlalo esandulele ochungechungeni, okuyinto ngokungagwegwesi babegxile fripley. Awu, manje uyazi ukuthi zingaki ohambweni GTA 5 ku-PC emkhankasweni indaba. Kodwa, njengoba wazi, udinga ukwenza imisebenzi okuningi ukuze uthole 100% kuyedlula.
Uma unesithakazelo, indlela ohambweni eziningi GTA 5 ku-Xbox 360 noma isiphi esinye isigungu, khona-ke kufanele sinake hhayi kuphela uhlela imisebenzi, kodwa futhi nalabo musa kuthinte Uhlelo lwendaba. Ngokwesibonelo, emigwaqweni kukhona ekilasini elihlukile izinhlamvu, ababiziweyo eccentrics futhi abangabazi. Uma uhlangana nabo, ungathola kuzo inani elithile imisebenzi ezincane. Abakwazi kwenziwe, kodwa ungakwazi indiva, kodwa namanje Kunconywa kubo ukwambula phansi ngenxa yezizathu eziningana ezinhle. Okokuqala, diversifies ndima yakho, kanti okwesibili, ungakwazi ukuthola imali eningi kwezinye imisebenzi, futhi endaweni yesithathu, njengoba kuye kwashiwo phambilini, ngaphandle lokhu ngeke uthole Ukudlula amaphesenti ayikhulu. Ngakho hamba beyofuna zonke abangabazi, okuyinto ndawonye uyoninika omunye ohambweni 58. Kukhumbuleni nje lapha ezinye abangabazi uyavuma ukuba akhulume nomunye nje izinhlamvu yakho ezintathu. Awu, manje wena ukwazi okwengeziwe eyodwa uhlobo lomsebenzi, kodwa okwamanje kuze kube manje ungazange wathola impendulo eqondile embuzweni ohambweni eziningi kanjani GTA 5 ku-PC.
Uma ucabangela umbuzo ohambweni eziningi kanjani GTA 5 ku-PS3 kanye nezinye izingosi, kufanele futhi unake ukuzilibazisa nokuzijabulisa, ezingasetshenziswa ukubhekana namaqhawe akho. Kukhona, isibonelo, mayelana game of imicibisholo, womjaho wasemgwaqeni, target sokudubula, nokunye. Lokhu kuyindlela enhle ukuba ujabule, ukuzijabulisa, ukufakazela bonke esiphakeme futhi uthole ibhonasi for ngokuwina. Kodwa futhi akufanele umzuzwana nikhohlwe isivumelwano 100%, ngoba kufanele uphelele ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi mncintiswano kokubili yamahhashi kanye imicibisholo, ukuze kuzuzwe umphumela ephelele.
Lesi sigaba ngeke uhlu imisebenzi ayikwazi ngokugcwele chasiselwe Mission. Kunzima ukuchaza, ngakho-ke kungcono ukukhombisa isibonelo. Uzogcina omunye imisebenzi, uma uthenga impahla emahhovisi amahlanu. Futhi, umvuzo wakho azonikezwa uma wenza ukuthenga kwakho kuqala alikho esitolo yangempela, futhi nge-Internet. Nokho, phawula ukuthi ngalinye lalawa imisebenzi musa kuthinte ndima yakho cha, njengoba ungangezi ukuba nesithakazelo sakho. Lokhu kungenzeka okusekelwe yokuthi cishe bonke of them ukukulandela ngokuzenzakalela ngesikhathi game.
Ungakhohlwa futhi mayelana ingxenye ebaluleke kakhulu izenzakalo ezingahleliwe, ngoba futhi basonta imisebenzi, futhi kufanele zithathwe ba ku-akhawunti uma ufuna bala inani ohambweni in the game. Zonke lezi zenzakalo engenzeka kuwe 57 izingcezu, kodwa ukuthi kufanele uchithe kule mdlalo kakhulu, isikhathi eside kakhulu. Yiziphi? Kubaluleke nemiyalezo izenzakalo engenzeka kunoma yiziphi izinhlamvu yakho emgwaqweni nganoma yingasiphi esinikezwe umdlalo. Ngokwesibonelo, kukhona umcimbi kuzokuvumela ukuxosha lomphangi ezaziphanga indoda i-ATM, futhi lapha une ukwenza ukukhetha zokuziphatha: ushiye imali wabuyela kubo noma ukubanika imali kumnikazi. izenzakalo ezinjalo kakhulu, futhi awunawo indlela ukuthonya kuzokwenzekani noma cha. Wena nje kufanele ulinde.
Ngakho, sekuyisikhathi ukubala malini yonke ohambweni etholakala GTA 5. Kufanele uqale nge imisebenzi ngokwezihloko, okuyinto kanye ngokuphanga, lapho 69. Ngemva zazikhuluma mayelana nomsebenzi abangabazi, abo 58. Khona-ke kubhekwe wokuzilibazisa ukuthi zisebenza kwabahamba ukuthula umdlalo kubo has 59. futhi kukhona kuphela zenzakalo ezivele zenzeke nje, lapho kukhona 57. ngakho, kuvela ukuthi kulo lonke GTA 5 has 243 umsebenzi, futhi lokho akuhlanganisi imisebenzi eyengeziwe ukuthi bamane nje ukuya ngezigaba jikelele umdlalo, ngakho akufanele kube efaka ne-akhawunti. Nokho, kukhona omunye umbuzo obalulekile ohlupha abadlala eziningi: kudingeka uthole 100% kuyedlula ukuthi ngokuphelele yonke imisebenzi? Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kwakuyoba ngempela okunengqondo, kodwa Onjiniyela angadingi kuwe akunakwenzeka. Yiqiniso, Uhlelo lwendaba kuyomelwe baye ngokuphelele, kodwa abantu abangabazi, ungakwazi ukwenza ingqikithi imisebenzi 20, ngokusho kwe wokuzilibazisa - 42. A zenzakalo ezivele zenzeke nje, inikezwe iletha zabo, kuyoba okwanele 14. nje Umphumela ukuthi amaphesenti ayikhulu ngokusebenzisa umdlalo ngeke udinga ukwenza zonke ngesakhiwo imisebenzi, 76 ohlangothini ohambweni eziphathelene izigaba ezihlukahlukene. Eqinisweni, akuyona umsebenzi onzima kangaka, ikakhulu uma kucatshangelwa iqiniso lokuthi Gameplay Liyindawo kumnandi.
Game Stars Izimpi: The Old Republic: i Uhlolojikelele, incazelo izidingo uhlelo
Ikhompyutha imidlalo Indawo - kuyinto ...
Indlela yokwenza umthombo engapheli lava "Maynkraft"?
A. S. Pushkin, "emagqumeni Georgia": ukuhlaziya inkondlo
Ngingakusebenzisa kanjani lokhu izidakamizwa "Nasonex" e adenoids?
Imisebenzi 7--zip Ezinqolobaneni